Weerar Ka Dhacay Duleedka Magaalada Kismaayo. – Calamada.com
Weerar Ka Dhacay Duleedka Magaalada Kismaayo.
calamada December 17, 2016 1 min read
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubbada hoose waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay duleedka magaaladaasi ay ka dhaceen dagaalo culus oo u dhaxeeya ciidamada Shabaabul Mujaahidiin iyo kuwa Axmed Madoobe.
Dagaalka waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan’waxeyna maleeshiyaatka maamulka Ashahaado la dirirka Axmed Madoobe garab ka helayeen inta uu dagaalka socday ciidamada Nasaarada Kenya iyo kuwoo kale oo caddaan ah.
Dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta auaa sheegay in dagaalka si ba’an loogu jibiyay maleeshiyaatka Axmed Madoobe oo tiro askar ah dhimasho iyo dhaawac ay kaga noqotay dagaalkaasi.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada Mujaahidiinta gacanta ku dhigeen gaari Dhayna ah oo laga qabsaday maamulka Axmed Madoobe’sidoo kale waxey Shabaabul Mujaahidiin gacanta ku dhigeen saanad hub ah.
Maleeshiyaatka Axmed Madoobe ayaa goobta lagu dagaalamay kaga cararay meydadka saddex askari taasi moo muujineysa in maamulka Ashahaado la dirirka fadhigiisu yahay Kismaayo khasaara culus lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Previous: Halkii Madfac RPG Ah Oo Dagaalyahanka Al Shabaab Uu La Helo Anteenada Shirkadda Safaaricom Wuxuu Sababayaa Khasaara Dhan $250,000 Warbixin Rasmi Ah.
Next: Shil Gaari Oo Ka Dhacay Duleedka Degmada Dhuusa-mareeb.
1 thought on “Weerar Ka Dhacay Duleedka Magaalada Kismaayo.”
Hago,aan ashahaada ladirirka gaala raaca